सरकारले सुनदेखि नुनसम्म उत्खननका लागि निकाल्यो सूचना, कुन जिल्लामा के पाइन्छ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > अर्थ तथा ब्यापार > सरकारले सुनदेखि नुनसम्म उत्खननका लागि निकाल्यो सूचना, कुन जिल्लामा के पाइन्छ?
June 22, 2020 June 22, 2020 GRISHI157
काठमाडौंं : सरकारले देशका विभिन्न दस स्थानमा रहेका नुनदेखि सुनसम्मको खानी अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने भएको छ।
दसवटामध्ये चार ठाउँमा उत्खनन (माइनिङ) गर्न र बाँकी ठाउँमा अन्वेषण (प्रोसपेक्टिङ)का लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सूचना आह्वान गरिएको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ।
अन्वेषणको अनुमति पत्रका लागि ३५ दिन र उत्खननका लागि ५० दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरिएको छ। उत्खननका लागि दसदेखि तीस वर्षसम्म र अन्वेषणका लागि दुई वर्ष प्रदान गरिने महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ। विभागका अनुसार रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिकास्थित किमासेपोझार वनमा ३० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको सुनखानीको अन्वेषण गर्न सूचना आह्वान गरिएको छ।
नागरिकता विधेयकको एनआरएनएद्वारा स्वागत !
May 28, 2020 GRISHI